ထိုင်းကြက်သားသုပ် | Wutyee Food House
« ကြက်သား နှင့် ကြက်အူချောင်း ပီဇာ
၀က်သားတုတ်ထိုး အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်ရအောင် »
January 5, 2010 by chowutyee ထိုင်းကြက်သားသုပ်
၁။ ကြက်သား – ၂၀ ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၂။ ကြက်သွန်နီ – ၁လုံးခွဲ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၄။ ဂျင်း – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၅။ ပြောင်းဖူးသေး – ၅ခု (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၆။ စပါးလင် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၇။ ရှမ်းနံနံ – ၂ပင် (အစောင်းလှီးပါ)
၈။ ကြက်သွန်မြိတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၉။ ငရုတ်သီးနီိ – ၆ခု (အစောင်းလှီးပါ)
၁၀။ နံနံပင် – ၁စည်း
၁၁။ သံပရာသီး – ၁လုံး
၁၂။ ငံပြာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၁၃။ အုန်းနို့မှုန့် (Coconut Powder) (သို့) Coconut Cream – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ ဒယ်ထဲ ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ဂျင်းကို ဆီထိုးပေးပါ။
၂။ ထို့နောက် ပြောင်းဖူးသေး၊ စပါးလင် ထည့်မွှေပါ။
၃။ ငရုတ်သီးနီ၊ ကြက်သား ထည့်မွှေ။ အရသာအပေါ့အငံအတွက် ခရုဆီ၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ သံပရာသီး ညှစ်၊ ငံပြာရည်၊ ထည့်မွှေပေးပါ။
၄။ အုန်းနို့မှုန့် ထည့်မွှေပေးပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ်မှ ရှမ်းနံနံ၊ နံနံပင် အုပ်ပေးပါ။
၅။ ထိုင်းစတိုင် အရသာရှိသော ကြက်သားသုပ်ကို မြိန်ရှပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါပြီး။
– ၀တ်ရည်က ထိုင်းကြက်သားသုပ်ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူရဲ့ ထူးခြားမူကြောင့်ပါ။ တခြားအသုပ်တွေနဲ့ မတူပဲ သူရဲ့ထူးခြားမူက ဟင်းလိုချက်ရတာပါပဲ.. အုန်းနို့ထည့်ရတဲ့ အတွက် အရသာက အနည်းငယ်စပ်ပြီး စိမ်၍ မွှေးနေပါတယ်။ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်ကြီးများမှာ မှာယူစားသောက်နိုင်ပါတယ်။
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 8 Comments	8 Responses
on January 5, 2010 at 9:49 am | Reply Hmone Gyi
look very yummmy….a hint ahint hungry lar pe….noodle bae eat ya tar kyae pe …. kha lae salad ma eat ya tar kyae pe…today try kyi own ma… thank for uploading
on January 5, 2010 at 9:54 am | Reply chowutyee
ကိုယ်ချက်ကြည့်ပြီး ကောင်းမကောင်း မကြောင်းပြန်အုန်း
on April 26, 2010 at 10:52 pm | Reply may
မမ စပါးလင်မရှိရင်ရော ရလားဟင်???
on April 27, 2010 at 2:43 pm | Reply chowutyee
May ရေ စပါးလင်မပါရင် အနံ့နည်းနည်းကွဲတာက လွဲလို့ အရသာကတော့ အတူတူပါပဲ.. စပါးလင် မပါပဲ ချက်လည်း အရသာကောင်းပါတယ်..😉
on April 29, 2010 at 8:45 am | Reply mee chit
မီးချစ် က အသုပ်နဲ့အချက် မှားများနေသလားတောင် ထင်မိတယ်..
အဒေါ်ကို ပြန်လည်တင်ပြပီး လုပ်စားပါဦးမည်..
on April 29, 2010 at 9:28 am | Reply chowutyee
yes, this thai salad is also really nice taste!!🙂
on May 14, 2012 at 2:04 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] January 5, 2010 ထိုင်းကြက်သားသုပ် […]
on May 25, 2014 at 6:03 am | Reply Sint Sint
အုန်းနို့ ထည့်ရတာ သေချာလား အမ ??